अष्ट्रेलिया विशेषः घर कर्जाका लागि बैंकले नीजि चरित्रलाई पनि हेर्छ ?
प्रश्नः बैंकले अचेल होम–लोन दिने क्रममा हाम्रो क्यारेक्टर पनि हेर्ने गरेको छ भन्ने सुनेको थिएँ, यसलाई अलि बिस्तृतमा बताइदिनुहुन्छ कि !
हे गोरा मानिसहरु हो, हेर हामी काला जातिको उपस्थिति यो देशमा कति पुरानो छ । यी ओढारका ३० हजार वर्ष पुराना आर्टले बकिरहेको छ । अष्ट्रेलियाको सुदुर उत्तरी
अष्ट्रेलिया विशेषः घर किन्दा बार्गेनिङ् कसरी गर्ने ?
प्रश्नः घरको भाउमा बार्गेनिङ् गर्न मिल्छ ? कतिसम्मको बार्गेनिङ् गर्न सकिन्छ होला ?
अष्ट्रेलियाको डरलाग्दो कार दुर्घटनाकाण्डः दुर्घटनाका आरोपी सागर भट्टराई विमानस्थलबाट पक्राउ
सिड्नी । केही दिन अगाडि दुईजनाको ज्यान जानेगरी सिड्नीमा भएको कार दुर्घटनाका चालक सागर भट्टराई पक्राउ परेका छन् ।
अष्ट्रेलिया विशेषः डिभोर्स गर्न के श्रीमान–श्रीमति दुवै अस्ट्रेलियामै हुनुपर्छ ?
यस स्तम्भमा म ‘फेमिली ल’ को सेरोफेरोमा केन्द्रित हुने प्रयास गर्नेछु । पारिवारिक कलह, घरेलु हिंसा वा सुझबुझमा नै हुने डीभोर्स वा त्यसले निम्त्याउने सम्पत्ति बाँडफाँट र बालबालिकाको रेखदेख । यी सार्है जटिल र असहज काम हुन् । यस्ता कुराहरुलाई राम्रोसँग मिलान गर्न नसक्दा, कानुनी झन्झट, घरेलु हिंसा र नाबालक सन्तानमा पर्ने असर अझ बढ्न सक्छ ।
अष्ट्रेलिया विशेषः ट्याक्स रिटर्नस् गर्दै हुनुहुन्छ ? विज्ञहरुको सुझाव यस्तो छ
अष्ट्रेलियाको कर सम्बन्धी नियम अनुसार प्रत्यक वर्ष जुलाईदेखि अक्टोवरभित्र ट्याक्ट रिफण्ड गर्नुपर्छ । आम्दानी र कर आफैले निर्धारण गर्ने सिद्धान्त अनुसा